I-UK yenziwe: Isixhumi se-pitch esingu-60A 8.5mm - Micro-Semiconductor.com
“Lokhu kusho ukuthi izinhlelo zokusebenza ezifana nokushaja ibhethri zingabhekiswa ngaphandle kokuthi kuhlukaniswe okukhona manje koxhumana nabo abaningi. Phakathi kwezicelo ezisemqoka ezihlosiwe kubalwa ukuqapha / ukuphathwa kwebhethri yemoto kagesi, izinhlelo zokulawula amandla kagesi, amarobhothi, ama-servo controls, ama-UAV neziphuphutheki, ”kusho inkampani.
Oxhumana nabo bahlelwe ngomugqa owodwa, noxhumana nabo abangu-2, 3 noma 4.
Umbhangqwana wokumatanisa uqukethe isixhumi samadoda esiqonde mpo-ebhodini esinokulungiswa kwebhodi, kanye nesixhumi sekhebula lesifazane elizokwamukela izintambo zegeji eziyi-8AWG.
Oxhumana nabo bangamatshe ayisithupha e-beryllium copper
I-mate-before-lock mechanism inciphisa amathuba okulimala okwenzeka ngesikhathi senqubo yokukhiya ukuqinisekisa ukuthi izinto zokumatanisa ziqondaniswe ngokuphelele kuqala.
Ukugubuzela oxhumana naye ngamunye nokwakhiwa okuhlukanisiwe kumisa ukungalingani kahle - izixhumi zinempilo yomjikelezo wokukhwelana engama-250.
Izithupha zensimbi ezingenasici zifakwa entweni yokuxhuma yabesifazane futhi awekho amathuluzi adingekayo. "Ukufakwa kwenkomba yokuxhumana kuqinisekisa ukuthi izinto ezixhuma ziqondiswe kahle," kusho uHarwin.
Ukusebenza kufinyelela ku-3kV, ngaphesheya kwe--65 ° C kuye + 150 ° C, nangokudlidliza kwe-20G amahora ayi-12.
“Ngemuva kokudonsa ngamandla emakethe kufakazelwe izixhumi zethu zamandla amakhulu zeDatamate Mix-Tek, amanye amathuba aseqalile ukuvela. Amakhasimende asondele kuthina edinga ukutholakala kwamanje nangaphezulu ”kusho umphathi weHarwin womkhiqizo uRyan Smart. "Imingcele elethwa uchungechunge lweKona izosivulela izimakethe ezintsha ezingaba khona, kanti iKona iyisixhumanisi sethu esenza kahle kakhulu kuze kube manje."
IHarwin yenza izixhumi zayo e-UK eHampshire.
Ikhasi lomkhiqizo lilapha